Kutsaurirwa kwehofisi yebazi yeZvapupu zvaJehovha yekuMadagascar neyekuIndonesia
“MWOYO wangu uzere nomufaro,” yakadaro imwe hanzvadzi paitsaurirwa bazi rokuMadagascar musi weMugovera, 24 January 2015. Hanzvadzi iyi pamwe chete nevamwewo 583 vakakokwa, vakafara vachiona imba itsva yokugara ine makamuri 19, neimba yokudyira yakawedzerwa kukura kwayo uyewo imba yokubikira yakagadziridzwa. Pakawedzerwawo mahofisi eDhipatimendi Rebasa, Dhipatimendi reAkaunzi, neDhipatimendi Remapurani Nokuvaka. Uyewo Dhipatimendi Rekurekodha neDhipatimendi Remutauro Wemasaini akavakirwa masitudhiyo matsva, uye pakatangwawo Dhipatimendi Rinoprinda Mabhuku eBraille. Pashure pekunzwa nhoroondo yebasa rekuparidza muMadagascar, vanhu vaiva pamusangano wacho vakanakidzwa nekunzwa hurukuro yekutsaurira yakapiwa naHama Mark Sanderson veDare Rinotungamirira.
Imba itsva yokugara ine makamuri 19 pabazi rokuMadagascar
Vanhu vaJehovha muJakarta, Indonesia, vakafara pavakaona mvura yemafashamo yakanga yakazara muguta iroro yaserera panguva yaida kuzotsaurirwa bazi reko musi wa14 February 2015. Bazi iri riri panhurikidzwa yechi31 pane chimwe chivako chine nhurikidzwa 42 uye riri kushandisa dzimwe nhurikidzwa 12 dziri pane chimwe chivako chiri pedyo. Madhipatimendi akati kuti epaBheteri ari mune zvimwe zvivako zviri pedyo. Hama Anthony Morris veDare Rinotungamirira vakapa hurukuro yekutsaurira bazi racho uye mangwana acho vakapa hurukuro ine musoro unoti “Rambai Muchiita Basa Rakanaka,” kuvanhu 15 257 vainge vakaungana mune imwe nhandare yenhabvu. Purogiramu yacho yakatepfenyurwa zvekuti yakaonekwa nevanhu 11 189 avo vaiva kune dzimwe nzvimbo 41, zvichibva zvaita kuti ive purogiramu yakapindwa nevanhu vakawanda kupfuura dzose dzakamboitwa muIndonesia. Hama Ronald Jacka, mumwe wemamishinari akatanga kuenda kuIndonesia vakati: “Pandakasvika kuno muna 1951, kwaingova nevaparidzi 26 chete. Asi nhasi vanhu vanopfuura 26 000 vapinda purogiramu iyi inokosha. Zvechokwadi Jehovha ari kukomborera vanhu vake muIndonesia!”
Mahofisi Uye Kuratidzwa Zvinoitwapo: Madagascar
Mahofisi Uye Kuratidzwa Zvinoitwapo: Indonesia